लक्ष्मीपूजा | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
Home कुरोको चुरो लक्ष्मीपूजा
यस विचित्र लोकमा पागल पनि थरीथरीका हुन्छन् । कुनै कुनै त उग्र प्रचण्ड पागल हुन्छन् । अर्थात् आफू त पक्कै पागल हुन्छन् नै तर आफ्नो पागलपनको बारेमा उनीहरूलाई अत्तोपत्तो क्यै हुँदैन । अनि आफूबाहेक बाँकी सारा संसारलाई पागल ठान्दछन् ।
तर अचेल यौटा कुनै विश्वप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकले भनेको छ रेस सबै मान्छेमा पागलपन अवश्य हुन्छ, त्यसको मात्रा बढी र कम मात्रको फरक पाइन्छ । जसरी अन्य कुनै रोग बढेपछि हामी सचेत हुन्छौं, त्यसैगरी पागलपनको बारेमा पनि यस्तै होश पु¥याउनुपर्छ ।
चाडबाडको लहरमा जय जय लक्ष्मीपूजा भन्ने शब्द मेरो ध्यानमा आउँछ, त्यत्तिखेर केटाकेटीमा सुनेको यौटा कथाको सम्झना हुन जान्छ । कथा सानै छ, सुन्नी हो ?
हाम्रो हिन्दू समाजकै एकजना सामान्य खालका सेठजी थिए । पुड्का–पुड्का, डल्ला–डल्ला अलि–अलि भुँडी निस्केको तालु खुइलिएर उसिनेको आलु जस्तो देखिने । अलि–अलि छ्याके–छ्याके पनि थिए । अर्थात् उनी सो¥हैआना सेठजी थिए ।
हरेक वर्ष लक्ष्मीपूजाको अवसरमा निकै तामझाम र भव्यताका साथ लक्ष्मीपूजन गर्थे । तर उनको यौटा सधैंभरिको स्थायी गुनासो थियो– लक्ष्मीजी मेरे घर क्यों नहीं आती ?
उनको प्रश्नको जवाफ कसले दिन सक्थ्यो र १ सेठजीको यो प्रश्न सुनेर सबै मुसुक्क हाँस्थे, तर क्यै भन्दैनथिए । जवाफ भए पो दिनु ।
लक्ष्मीपूजाको सोही क्रममा एक वर्ष के भयो भने, उनकै कुनै सम्बन्धीले उनलाई यसरी उचाली दिए छ । लक्ष्मीपूजाको रातमा आफ्नो भएभरको सुनचाँदी र नगद यौटा बाकसमा राखेर रातभरि खुला छाडिदिनु । अनि लक्ष्मीजी प्रसन्न भएर त्यै बाकसमा आएर बस्छिन् । यसो ग¥यो भने तिमी साँच्चिकै धन्ना सेठ हुन सक्छौ ।
बिचरा सोझा–साझा सेठ पत्याए छन् । एक रातको त कुरा हो नि । ताला खुला छाडेर म जाग्राम बसेर हेरौंला । लक्ष्मीजी साँच्चिकै आइहाल्छिन् कि ? श्रद्धापूर्वक लक्ष्मीपूजा गरेछन्, अनि त ती बिचरो सेठले भएभरको सुनचाँदी, नगद एकै ठाउँमा राखेर लक्ष्मीजीलाई आसन प्रदान गरे । कहाँबाट त आउँछिन् लक्ष्मीजी ? भएका थोरबहुत गहनागुरिया ह्वाङ्गै पारेर बिचरो सेठ राति एकैछिन निद्रादेवीसँग जिस्किन थालेछन् ।
त्यै मौका पारेर चिनेजानेकाले सेठजीको खजाना साफ गरिदिएछ । मारेन अब ? बिचरा ती सेठ त पागलै भएछन । आजको युगमा सोझो हुन पनि राम्रो हुँदो रैन छ ।
लक्ष्मी (धन) भए घमण्डले पागल हुन्छन् । लक्ष्मी नभए पनि गरीबीले पनि पागल हुन्छन् । समुद्र मन्थन गर्दा लक्ष्मी र अमृत दुवै निस्केका थिए । दुवैमा कति भिन्नता छ । धनी भए मान्छे मात्तिन्छ, अनि अमृत त कहिल्यै खानै पाउँदैन । त्यसैले यस धरतीलाई मत्र्यलोक भन्दा रै‘छन् । लक्ष्मीजीको कृपादृष्टि सबैमाथि वर्षोस् । त्यसो त लक्ष्मी नाम गरेका थुप्रै छन्, हाम्रो समाज तर प्रायः सबै दरिद्र छन् ।
Previous articleहामी सबै ईश्वर हौं